CDM လုပ်မယ့် စစ်သားနဲ့ ရဲ တွေအတွက် ကြိုဆိုလက်ခံရေးနဲ့ တပ်တွေပေါင်းစည်ရေးအတွက် အ… – PVTV Myanmar
CDM လုပ်မယ့် စစ်သားနဲ့ ရဲ တွေအတွက် ကြိုဆိုလက်ခံရေးနဲ့ တပ်တွေပေါင်းစည်ရေးအတွက် အ…
CDM လုပ်မယ့် စစ်သားနဲ့ ရဲ တွေအတွက် ကြိုဆိုလက်ခံရေးနဲ့ တပ်တွေပေါင်းစည်ရေးအတွက် အထူးကော်မတီတစ်ရပ်ကို NUG ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မည့် သတင်း
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)တပ်မဟာ(၅) နယ်မြေမှာ တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်လို့ ၂ရက်အတွင်းမှာ အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်က ၁၂ဦးသေဆုံးပြီး ၁၉ဦးဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်း
မူဆယ်မြို့နယ် ပန်ဆိုင်းဒေသမှာ ကိုးကန့်တပ်နဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ် တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ သတင်းတွေကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 10K Share – 1196
2021-08-23 at 7:51 PM
2021-08-23 at 8:05 PM
Zar Ni Lay says:
2021-08-23 at 8:06 PM
ေစတန္ ရဲ့ သမီး ပ်ဴိ says:
အျပဳသ​ေဘာ​ေဆာင္​ ​ေဝဖန္​တာပါ​ေနာ္​ အမွားပါရင္​ ခြင္​့လြတ္​​ေပးဖို႔​ေတာင္​းဆိုပါတယ္​
အန္​ ယူ ဂ်ီ လို႔ ဖတ္​ျပ​ေပးရင္​ နား​ေထာင္​လို႔ ပို​ေကာင္​းမယ္​ ထင္​ပါတယ္​
အခု က အန္​ ယူး ဂ်ီ လို႔ ၾကား​ေနမိလို႔ပါ
​ေက အန္​ ယူ လည္​း ထို႔အတူပါ
​ေကအန္​းယူ လို႔ ၾကားမိျပန္​တယ္​
U Sai Thura says:
2021-08-23 at 8:19 PM
2021-08-23 at 8:20 PM
ဘုံရန်သူ ဖြစ်နေပီ ဘက်ပေါင်းစုံ အဖွဲ့ပေါင်းစုံက တိုက်နေပီ အောင်ပွဲက နီးလာပီ
Au Cho says:
2021-08-23 at 8:21 PM
2021-08-23 at 8:24 PM
ပြည်သူ့တပ်မတော်သားတွေရေ မောင်မောင်ခေါ်တုန်း ဗျာထူးရင်ကောင်းမယ်နော့🤗🤗🤗
April May May says:
အရမ်းကောင်းတဲ့အစည်စည်ပါ ပြည်သူကိုတကယ်ချစ်တဲ့ပြည်သူ့တပ်မတော်သားနှင့် ပြည်သူ့ရဲ အစစ်မှန်တွေ အတွက် နေရာမှန်ရသွားသလို ပြည်သူတွေကလည်း အားကိုး အားထားရတဲ့ပြည်သူ့စစ်သားနှင့်ပြည်သူ့ရဲတွေကို ကြိုဆိုထောက်ခံပါတယ်ရှင်
2021-08-23 at 8:37 PM
Kyaw December Love says:
Daw Htay Htay Win says:
2021-08-23 at 8:55 PM
မောင်လူ အေး says:
2021-08-23 at 9:00 PM
2021-08-23 at 9:01 PM
Zin Oo Maung says:
2021-08-23 at 9:13 PM
2021-08-23 at 9:26 PM
Mar Phyu says:
2021-08-23 at 9:28 PM
2021-08-23 at 9:45 PM
Daw Aye Aye Mu says:
2021-08-23 at 9:54 PM
2021-08-23 at 10:07 PM
2021-08-23 at 10:10 PM
Moe Kyi says:
2021-08-23 at 10:17 PM
Gg. မဂ်လာပါ PVTV
ျမတ္ရ တနာ says:
2021-08-23 at 11:14 PM
2021-08-24 at 12:38 AM
2021-08-24 at 7:15 AM
2021-08-24 at 2:01 PM
Ah Khoon says:
မောင်ခန့်စည်သူ အထွေထွေလုပ်သားဝန်ထမ်း မန်းလေးမြို့ အထွေထွေကုဆေးရုံကြီ လစာ ၁၆၅၀၀ Cdm ၉. ၂. ၂၀၂၁
Continuous Protest (22 – 8 – 2021)